Yintoni Imfazwe YeArmagedon? | Imibuzo YeBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKachin IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTongan IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Imfazwe yeArmagedon yimfazwe yokugqibela eza kuba phakathi koorhulumente babantu noThixo. Aba rhulumente nabaxhasi babo bayamchasa uThixo kwanangoku kuba abamthobeli. (INdumiso 2:2) Imfazwe yeArmagedon iza kubatshabalalisa aba rhulumente.—Daniyeli 2:44.
Igama elithi Armagedon livela kube kanye eBhayibhileni, kwiSityhilelo 16:16. Isiprofeto esikwiSityhilelo sithi, “kwindawo ebizwa ngesiHebhere ngokuba yiHar–Magedon,” “ookumkani bomhlaba omiweyo uphela” baya kuhlanganisela “ndawonye kwimfazwe yemini enkulu kaThixo uSomandla.”—ISityhilelo 16:14.
Ngubani oza kulwa ngeArmagedon? UYesu Kristu uza kukhokela umkhosi oza koyisa iintshaba zikaThixo. (ISityhilelo 19:11-16, 19-21) Ezi ntshaba ziquka abo bachasa igunya likaThixo nabamdelelayo.—Hezekile 39:7.
Ngaba iArmagedon iza kulwelwa kuMbindi Mpuma? Akunjalo. Kunokuba ibe kwindawo enye, imfazwe yeArmagedon iza kuba semhlabeni wonke.—Yeremiya 25:32-34; Hezekile 39:17-20.
Maxa wambi xa kubhekiselwa kwiArmagedon kuye kuthiwe “Har–Magedon” (ngesiHebhere Har Meghiddohnʹ), gama elo elithetha “iNtaba yeMegido.” IMegido yayisisixeko kummandla woSirayeli wamandulo. Imbali isichazela ukuba kwakha kwaliwa iimfazwe ezibalulekileyo kuloo mmandla, kuquka ezinye ekuthethwa ngazo eBhayibhileni. (ABagwebi 5:19, 20; 2 Kumkani 9:27; 23:29) Sekunjalo, xa kuthethwa ngeArmagedon akubhekiselwa kummandla wokoqobo okufutshane neMegido yamandulo. Akukho ntaba inkulu pha, ibe neNtili yaseYizereli ayinakubathwala bonke abo baza kube besilwa noThixo. Kunoko, iArmagedon imela imeko ekuza kube kuyiyo emhlabeni apho iintlanga ziza kube zilala ngengubo enye ekuchaseni uThixo.
Ziza kube zinjani iimeko ebudeni bemfazwe yeArmagedon? Nangona singazi indlela uThixo aza kuwasebenzisa ngayo amandla akhe, uza kube esenazo izixhobo awazisebenzisa mandulo—isichotho, inyikima, izantyalantyala zemvula, umlilo, isalfure, umbane nezifo. (Yobhi 38:22, 23; Hezekile 38:19, 22; Habhakuki 3:10, 11; Zekariya 14:12) Zibhidekile, ezinye iintshaba zikaThixo ziza kubulalana, ibe ekugqibeleni ziza kubona ukuba nguThixo olwayo.—Hezekile 38:21, 23; Zekariya 14:13.
Ngaba ukubakho kweArmagedon kuza kuba sisiphelo somhlaba? Akunjalo, ekubeni umhlaba ulikhaya loluntu. (INdumiso 37:29; 96:10; INtshumayeli 1:4) Kunokuba iArmagedon itshabalalise abantu, iza kubasindisa kuba “isihlwele esikhulu” sabakhonzi bakaThixo siya kusinda.—ISityhilelo 7:9, 14; INdumiso 37:34.
Igama elithi “ihlabathi” alibhekiseli nje emhlabeni kodwa maxa wambi libhekisela nakubantu abangendawo abachasa uThixo. (1 Yohane 2:15-17) Ngenxa yoko, iArmagedon iza ‘kuliphelisa eli phakade.’—Mateyu 24:3, IBhayibhile YesiXhosa Ka-1990.
Iza kubakho nini iArmagedon? Xa ethetha ‘ngembandezelo enkulu’ eyincopho yeArmagedon, uYesu wathi: “Akukho bani uwaziyo loo mhla nelo lixa, azazi neengelosi zamazulu engazi noNyana, kodwa nguBawo kuphela.” (Mateyu 24:21, 36) Noko ke, iBhayibhile ithi iArmagedon iza kwenzeka ebudeni bobukho bukaYesu obungabonakaliyo, obaqalisa ngo-1914.—Mateyu 24:37-39.
Funda ngendlela iMini Yomgwebo eza kuba yintsikelelo ngayo kubantu bonke.
Imini Yentshabalalo Isenokungabi Yile Nto Uyicingayo